लालबाबु पण्डित सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सांसद एवं पूर्व मन्त्री हुन् । २०७० सालमा पहिलो पटक मन्त्री बनेको समयमा डीभी, पीआर लिएका कर्मचारी सरकारी सेवामा अयोग्य हुने कानून बनाएर लालबाबु चर्चामा रहेका थिए ।
२०७४ सालमा गठन भएको केपी शर्मा ओली सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्मा अटाएका लालबाबु पण्डित २०७६ मंसिर ४ गते भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा बाहिरिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका उनले कर्मचारी समयोेजनको काम समयमै पूरा गरेका थिए ।
लोकान्तर डटकमको ‘लोकान्तर शो’मा कुरा गर्दै पूर्व मन्त्री पण्डितले कामको शिलशिलामा कर्मचारीले नेताको फोन लगाएर धम्की दिने गरेको खुलासा गरेका छन् । ‘एक जना होइन, सय र हजारको संख्यामा धम्की आएको थियो,’ पण्डितले लोकान्तरसँग भने ।
गाडीको गतिमा हिँडिरहेको सरकार अब रकेटको गतिमा उडेर काम गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुपरेको प्रधामनन्त्री ओलीको भनाइ रहेकाले रकेटको स्पीडमा काम भएको हेर्न फागुनसम्म धैर्यता गर्न लालबाबुले आग्रह गरे ।
‘कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा फेल भएकाहरू मन्त्री छन्, उच्च अंक ल्याउनेहरू मन्त्रीबाट बाहिरिनुपर्‍यो,’ पूर्व मन्त्री पण्डित भन्छन्, ‘फागुनपछि सरकार सुपर रकेट हो कि महारकेटमा उड्ने होला !’
मन्त्रीका रुपमा तपाईं सफल कि असफल ? दुईतिहाइको सरकारले किन जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन ? देश नबन्नुमा राजनीतिक दलका नेता दोषी कि कर्मचारी ? यी प्रश्नको जवाफका लागि
हेर्नुहोस् भिडियो अन्तर्वार्ता –